Dzese nhau dzeIOS 11.3 Beta 1 | IPhone nhau
Dzese nhau muIOS 11.3 Beta 1
Mushure mekuzvizivisa mangwanani ano, Apple masikati ano inotangisa iOS 11.3 Beta 1, yekutanga vhezheni yakagadzirirwa vashanduri veyekuvandudza iyo inosvika kune vese vashandisi ino chitubu maererano nekambani pachayo yakave nechokwadi mukuburitswa kwayo. Iyi yekuvandudza ichaunza mhinduro kumatambudziko ebhatiri, ine bhatani rinokutendera kuti usabvisa kuti mashandiro e iPhone yako anosiyana zvichienderana nehutano hwebhatiri rako, asi zvakare zvinounza dzimwe nhau.
Iyo yekuvandudza ichave ichiwanikwa kune avo vashandisi vane yekuvandudza account, uye zvinotarisirwa kuti mumazuva mashoma anotevera ichazosvikawo kune vashandisi vanotora chikamu muPublic Beta chirongwa (mahara) icho Apple yanga ichipa kwemakore mashoma. Isu tinokuudza zvese shanduko dzinosanganisira iyi yekutanga Beta yeIOS 11.3.
1 Nyowani Animoji uye Bhizinesi Chats
2 Hutano Zvinyorwa
3 Kuwedzera Kwechokwadi
4 Bhatiri manejimendi
5 Zvimwe zvitsva
Nyowani Animoji uye Bhizinesi Chats
Apple inoramba ichibhejera paAnimoji, uye nekuda kweizvi yakasanganisira mavara matsva ayo achawedzera kabhuku kadiki katakave nako kusvika zvino. Dhiragoni, bere, dehenya uye shumba zvinowedzera runyorwa rwevatambi kusvika gumi nematanhatu, yatinogona kutumira mifananidzo inosekesa tichishandisa iyo application application uye chete kubva kune yedu iPhone X, tisingabvumirane nedzimwe mhando dzekare. Chimwe chiitiko chitsva chakabatanidzwawo muMessage application, "Bhizinesi Chat", chinhu chakada kufanana neicho WhatsApp chiri kuvhura kutenderera pasirese uye nacho chatichakwanisa kutaurirana tichishandisa mameseji nemakambani kuti tigamuchire rubatsiro rwehunyanzvi kana chero mumwe mubvunzo. .
Zvehutano marekodhi zvakare anotendera vashandisi kuve neakakodzera dhata kubva kune yavo yekurapa nhoroondo yakachengetedzwa pane yavo iPhone. Kune izvi, zvichave zvakakosha kuti kambani yako yehutano ienderane nechirongwa ichi, icho panguva ino chinoitika chete muUnited States, asi idanho rekutanga uye rakanyatsodikanwa iro tinotarisira kuti nekukurumidza dzimwe nyika nemabasa ezvehutano vachada kuisa mukati mebhenefiti yavo, nekuti zvaizobatsira zvakanyanya basa revashandi vehutano pavanenge vachichengeta varwere kunze kwenzvimbo yavo yenguva dzose kana kunyangwe kunze kwenyika.
Kuwedzera kwechokwadi kunotora maficha nyowani neARKit 1.5 sezvo ichigona ikozvino kushanda nemaposta uye mifananidzo yekukuunzira iwe nyowani zviitiko zvekudyidzana. Kusvika parizvino HomeKit yaingoshanda chete nenzvimbo dzakatwasuka, asi ikozvino inogona zvakare kuona mapepa, zviratidzo uye mabasa ehunyanzvi, mukuwedzera kunatsiridza kuzivikanwa kwenzvimbo dzisina kujairika dzakadai sematafura akatenderera. Ivo vakawedzerawo resolution uye vakaita kuti ienderane ne autofocus.
Chimwe chezvinhu zvinotarisirwa zvitsva ndeyebhatiri manejimendi. iOS 11.3 inosanganisa ruzivo nezve chimiro chebhatiri uye ichakuudza kana zvichidikanwa kuitsiva. Izvo zvinotipawo mukana wekudzora bhatiri manejimendi ficha, zvinove zvakadaidzwa neApple otomatiki system iyo inoderedza mashandiro eprosesa kutarisira bhatiri rako mune chiitiko chekuti haina hutano hwakanaka. Iye zvino chichava mushandisi anozofunga kana kuita kwete basa iri, iro rinenge richiwanikwa pane iyo iPhone 6 uye gare gare, kusanganisira iyo iPhone SE, uye kusvika iyo 7 uye 7 Plus.Kwete kudaro mumhando nyowani (8, 8 Plus uye X). Iri basa richave richiwanikwa mukati meMesystem> Bhatiri menyu asi haizosvika kusvika kumberi betas.
Kunze kwekuchinja uku kune zvakare kuvandudzwa muK HomeKit pamwe nemukana wekuti vagadziri vawedzere HomeKit kuenderana kune zviripo zvishandiso kuburikidza nesoftware, shanduko muApple Music uye Nhau nekuvapo kukuru kwemavhidhiyo, uye kuenderana nePamberi Mobile Nzvimbo, iyo isingawanikwe parizvino muSpain asi inoumbwa mune iyoyo kana uchisheedza emergency kubva ku iPhone yako nzvimbo yako inotumirwa otomatiki kuitira kuti masevhisi ekukurumidzira aende kana zvichidikanwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Dzese nhau muIOS 11.3 Beta 1
Hapana chandinonzwisisa, nekuti vakaburitsa iyo 11.2.5 nezuro yanhasi kuwedzera izvi zvese…. Ndinodana partridge dzungu
Pindura kuna joancor
Zvakanaka, zviri nyore kwazvo kunzwisisa ... ivo vanotangisa zvese zvitsva zvayakatoyedzwa mushanduro yepamutemo uyezve vobva vatanga beta ine dzimwe nhau dzichiri kuzoedzwa nekupenyeswa, ndicho chinhu chine musoro uye chine musoro ita, kunyanya kana paine zvakakosha kuvandudzwa mu11.2.5 mukuchengeteka.
Pedro Reyes akadaro
Zvakanaka, chinhu chebhatiri chinoita senge chakanyanya kunaka kwandiri kuitira kuti timbove nebasa redu rekare.
Pindura Pedro Reyes
Alberto Guerrero chinomira mufananidzo akadaro
Izvo zvinoita sezvakanakisa kwandiri inyaya yebhatiri, iyo yatinogona kusarudza pakati pebhatiri kana kuita.
Pindura kuna Alberto Guerrero
9x18 Podcast: Iyo Kumirira Kwapfuura, Iyo HomePod Iri Pano
Apple inoburitsa vhezheni 12.7.3 yeTunes nerutsigiro rwePambaPod